Ego ole ka m ga-eji na-akwụ ụgwọ ọrụ SEO?
E nwere ajụjụ abụọ a na-ajụkarị "Ego ole ụgwọ ụgwọ SEO na-efu?" Na "Ogologo oge ole ka ọ ga - ewe iji hụ nsonazụ mbụ SEO?" Ọ bụrụ na ndị mmadụ na - eche banyere ya, nke a abụghị ezi ihe kpatara ya. Ọ bụghị ọrụ dị mfe iji nyochaa njikarịcha engine ịchọpụta dị ka ụgwọ kachasị maka ụgwọ ọrụ SEO na-adabere n'ọtụtụ ihe kpatara ya. Ọnụahịa nke SEO na-emetụtakwa ụgwọ ọrụ ndị ọzọ, na ụlọ ọrụ ebe ịchọrọ ịkwalite azụmahịa gị. Ọnụahịa maka ọrụ SEO ga-akwụ ụgwọ pụkwara ịdịgasị iche n'ihi oke njikarịcha (zuru ụwa ọnụ, obodo, obodo, obodo, obodo ma ọ bụ mpaghara mpaghara). Nke a, n'ezie, ga-emetụta ọnụahịa nke SEO maka ọnọdụ gị pụrụ iche.
Taa, m ga-achọ ilebara uru nke ọchụchọ nyocha site na njikarịcha search engine iji nye nkọwa doro anya banyere "Ego ole ụgwọ ụgwọ SEO?" Ma ị na-eduga nnukwu ụlọ ọrụ ma ọ bụ azụmahịa mpaghara, ntụziaka a ga-enyere gị aka ịchọpụta ihe ego gị kwesịrị ile anya n'ime nchọpụta.
Olee ihe nwere ike ikpebi ụgwọ ọrụ SEO ụgwọ?
E nwere isi mgbanwe atọ dị mkpa ị ga-atụle mgbe ị na-achọpụta uru SEO gị. Nke mbụ, ọ bụ ọnọdụ (ebee ka ị nọ na mpaghara), ihe mgbaru ọsọ (gịnị bụ ihe mgbaru ọsọ gị?) Na usoro usoro iheomume (otu ngwa ngwa ka ịchọrọ imeziwanye?). Ụlọ ọrụ SEO niile na-echebara ihe ndị a echiche mgbe ha na-atụ ego ole SEO ga-akwụ ụgwọ maka azụmahịa gị. Ọ pụtara na site na nyochaa ọnọdụ onye ahịa ugbu a, ịghọta nghota ahịa na ịchọta usoro iheomume achọrọ, ụlọ ọrụ njikarịcha njinyocha nwere ike ịgbakọ ọnụahịa. Ọzọkwa, gị na niche ahịa ga-ekpebi a ọnụ ahịa nke ụgwọ SEO ọrụ. Ọ bụrụ na ịnweta ihe karịrị $ 200 site na ịmekọrịta ọhụụ ọhụrụ ahụ, ị ​​nwere ike ịtụ anya ịkwụ ụgwọ karịa ma ọ bụrụ na ịchọrọ onye ahịa ga-efu puku dollar. Dịka ndị ọkachamara SEO na-eche na ịlaghachi na ntinye ego, niche ahịa gị nwere ike ịhazi ọnụahịa ya n'otu aka. Ọnụahịa ahụ nwere ike ịdị elu ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ SEO ga-ahazi atụmatụ kachasị mma maka ọnọdụ pụrụ iche na ihe mgbaru ọsọ nke azụmahịa.
Ụgwọ a na-akwụkarị maka ụgwọ ọrụ SEO
Iji nyere gị aka ịhazi atụmatụ mmefu ego gị, ị ga-achọ ịma ego ole ị ga-eji na-arụ ọrụ njikarịcha. Nke a bụ nchọpụta nke ọnụahịa nke ụgwọ ahụ dịka ụdị ntinye ego atọ (kwa ọnwa / nkwekọrịta / atụmatụ dabeere na ya).
Sistemụ ọrụ SEO kwa ọnwa
Ọrụ nchịkwa nke ọnwa na-efu ihe dị ka $ 750 - $ 5,000 kwa ọnwa. N'ebe a, ọnụahịa maka ọrụ njikarịcha nwere ike dabere n'ókè nke mkpa ahịa na ogo ọrụ nke SEO na-enye. Ndị obere SEO ụlọ ọrụ ndị na-enye oke ego nke ọrụ kachasị mma nwere ọnụ ọnụ ahịa karịa ọnụ ụlọ ọrụ ntanetị. Ego kachasị na-akwụ ụgwọ n'etiti $ 2,000 na $ 5,000 kwa ọnwa SEO ọrụ.
Nkwekọrịta a na-akwụ ụgwọ ọrụ SEO
Ụgwọ maka nkwekọrịta ụgwọ ọrụ SEO dịgasị iche. Ụlọ ọrụ weebụsaịtị na ndị ọhụrụ bịara na nso nso a na ahịa ahịa dijitalụ choro nkwekọrịta SEO ọrụ dị ka ebe ntinye. Ụdị ọrụ a na-enye ndị nwere ebe nrụọrụ weebụ usoro niile kachasị mma, nchịkọta, na nkwado mgbe niile. Enwere ike ịkekọrịta ọrụ ọrụ SEO n'ime ọrụ ahịa (dị ka $ 0,50 kwa okwu), ọrụ nyocha (site na $ 500 na $ 8,000 kwa otu ọrụ), jikọta nyocha profaịlụ (site na $ 500 na $ 7,500 kwa oru ngo), yana ọrụ SMM ($ 500- $ 3,500).
Ụgwọ nke ụdị SEO dabere na mgbagwoju anya nke oru ngo na ọnọdụ ebe nrụọrụ weebụ dị ugbu a. Ọ bụrụ na ọrụ ụfọdụ chọrọ ahụmịhe pụrụ iche na ngwanrọ kachasị mma, ọnụahịa ọnụahịa maka ọrụ SEO na-akwụ ụgwọ na-eto ma ọ dịkarịa ala na 15%. Imirikiti ọrụ na-akwụ site na $ 1,000 ruo $ 30,000.
Ọnụ ọgụgụ nyocha oge
Ọrụ nlekọta SEO oge awa na-akwụ ụgwọ site na $ 50 ruo $ 300 kwa elekere Source .